၁၅၀၀တန် ကိုဘအေး ~ The ICT.com.mm Blog
တစ်ချိန်တုန်းက ခေတ်စားခဲ့တဲ့ Motto ဆောင်ပုဒ်လေး တစ်ခုရှိတယ်။ “ခေတ်မီသူတိုင်း ပင်လယ်ငါး စားကြသည်”တဲ့၊ အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ပင်လယ်ငါးကို သိပ်စားလေ့ မရှိကြဘူး။ ပင်လယ်ပိုင်း နေတဲ့သူတွေတောင် အကုန်လုံး မစားကြဘူး။ ရေချိုငါးလောက်ပဲ စားကြတာ။ အဲဒါနဲ့ စား၊ ဖျော် (ကုန်သွယ်ရေး)ကပဲ ထင်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးထဲမှာ “ယမုံနာ” ဆိုပြီး ပင်လယ်ငါး စားသောက်ဆိုင် တစ်ခုဖွင့်တယ်။ ငါးဆုပ်လုံးတို့ ဘာတို့ ပင်လယ်ငါး၊ ပင်လယ်စာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အစားအသောက်တွေ ရောင်းတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီလို “ခေတ်မီသူတိုင်း ပင်လယ်ငါး စားကြသည်”လို့ ဝါဒ ဖြန့်တာပေါ့။ ပင်လယ်ငါး မစားတဲ့သူကပဲ ခေတ်မမီတော့ သလိုလို။ အခုတော့လည်း တော်တော်များများ စားနေကြပါပြီ။
ကျွန်တော်ကလည်း အဲဒီအတိုင်း ဆောင်ပုဒ်တစ်ခု ထွင်မလားလို့ “ခေတ်မီသူတိုင်း ၁၅၀၀ ဖုန်း ကိုင်ကြသည်” လို့လေ။ ဒီဖုန်းက မထွက်ခင်ကလည်း လူတွေကြားမှာ သတင်းအမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး ဂယက်ရိုက်နေတာ။ ထွက်လာတော့လည်း မျှော်လင့်မထားတဲ့ အနေအထားမျိုးနဲ့။ လူတွေ ထင်ထားကြတာက ၅ထောင်နဲ့ ပေးမယ်လို့ ပြောတဲ့သူရှိပေမယ့် နောက်ဆုံးသတင်းအရ အနည်းဆုံး ၂ သောင်းလောက်တော့ ရှိမယ်လို့ ထင်ထားတာ။ ၁၅၀၀နဲ့ ပေးမယ်ဆိုတော့ တော်တော်လေး အ့ံသြသွားကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အကန့်အသတ် လေးတွေတော့ ပါလာတယ်။
ပြည်နယ်တိုင်း ဒေသကြီးတွေကို ပထမအသုတ် အနေနဲ့ ဆင်းမ်ကတ် သုံးသိန်းခွဲ ချပေးတာ။ MECTel တံဆိပ်နဲ့ ဖြစ်ပြီးတော့ ငွေဖြည့်ကတ်ကလည်း MECTel တံဆိပ်ပါတာပဲ သုံးရမယ်။ ဆင်းမ်ကတ်ကို ၁၅ရက်အတွင်း သုံးရမှာဖြစ်ပြီး ငွေ ၅၀၀၀ကျပ်ကိုလည်း နှစ်လနဲ့ ကုန်အောင် ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေကတော့ သတင်းစာတွေ၊ ဂျာနယ်တွေမှာလည်း ပါပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
ဆင်းမ်ကတ်တွေကို ဧပြီလ ၂၄ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ရတဲ့ ခွဲတမ်းတွေကို မဲနှိုက်ဖို့ ပြင်ဆင်ကြရပြန်တယ်။ ကိုဘအေးတို့ လမ်းအတွက် ၁၁လုံး ရတယ်။ ၂၂ရက်နေ့က ဓမ္မာရုံမှာ မဲနှိုက်တော့ အိမ်က လျှောက်ထားတဲ့ သုံးယောက်စလုံး မပေါက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အားမလျှော့ပါဘူး။ မဒမ်ဘအေးတို့ ကျောင်းမှာလည်း မဲနှိုက်မယ် ပြောတယ်။ ကျောင်းအတွက်က ၁၄ကဒ်ရတယ် ပြောတယ်။ ကျောင်းရှိအကုန် ဆရာ၊ ဆရာမက ၆၀လောက် ရှိတယ်။ ကျောင်းမှာတော့ မဒမ် ဘအေးက ကံကောင်းသွားတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ ၂၈ရက်နေ့က မှတ်ပုံတင်မိတ္တူနဲ့ ဓာတ်ပုံ နှစ်ပုံ ပေးဖို့ ကျောင်းက လှမ်းတောင်းတာနဲ့ မဒမ်ဘအေးလည်း မိတ္တူဆိုင်နဲ့ ဓာတ်ပုံဆိုင်နဲ့ ကျောင်းနဲ့ ပြေးလွှားလိုက် ရသေးတယ်။ ၆၀:၁၄မှာ မဲပေါက်တာဆိုတော့ ကံကောင်းတယ် ပြောရမှာပေါ့နော်။ စောစောက ပြောခဲ့သလိုပဲ ၁၅၀၀တန် ဖုန်းကိုင်ရပြီဆိုတော့ ခေတ်မီသွားပြီပေါ့။ မဲမပေါက်လို့ မရသေးတဲ့ သူတွေကတော့ မကြာမီလာမည် မျှော်………..။
ကိုဘအေးတို့ အိမ်ဘေးခန်းက ဆရာမကတော့ သူတို့ကျောင်းမှာ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးက တာဝန်ခံဆရာကို မဲမဖောက်ဘဲ တစ်လုံးပေးလိုက်တာ မဲမပေါက်တဲ့ ဆရာမတွေက ပွစိပွစိ လုပ်ပြီး တိုင်မယ်၊ တောမယ် ဖြစ်လို့ ဖုန်းရတဲ့ ဆရာလည်း ကြောက်ပြီး မယူတော့ဘဲ ပြန်ပေးလိုက်တယ်တဲ့။ ကျောင်းအုပ် ဆရာမကြီးက နောင်လည်း ပေးဦးမှာပဲ။ ဒီဆရာက ကျောင်းကိစ္စဆိုရင် သူပဲ လိုက်လုပ်နေတာဆိုတော့ တမင်ပေးလိုက်တာ။ အော် . . . လူတွေရဲ့ လောဘကလည်း ကြောက်စရာပဲနော်။ နည်းနည်းလေးမှ သည်းမခံနိုင်ကြတာ ခက်တယ်။ အဖြစ်တွေ သည်းနေကြတာလေ။ (ကိုယ်က ရလိုက်တာကိုး ဟဲဟဲ….)
ရပ်ကွက်ထဲတွေမှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ ပြီးသွားကြတဲ့ သူတွေ ရှိသလို၊ တချို့လည်း ပူညံ ပူညံနဲ့ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးက မမျှတဘူး။ တိုင်မယ်၊ တောမယ်နဲ့ ဖြစ်ကြတာလည်း ကြားရဲ့။ အစိုးရ အဖွဲ့ရုံးတောင် တိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့ ဆိုထားတာကိုး။ တချို့ ရပ်ကွက်တွေက ဝန်ထမ်းတွေ မလျှောက်ရဘူးလို့ ပြောတယ်။ တချို့နေရာတွေမှာတော့ အဲဒီလို မရှိဘူး။
ရုံးတွေမှာလည်း မဲနှိုက်ကြရတယ်။ နေ့စား ဝန်ထမ်းတွေတော့ မပါသေးဘူးလို့ ပြောတယ်။ နောက်တော့ အားလုံး ရကြမှာပါ။ မြန်မာပြည်လူဦးရေ သန်း ၆၀ရဲ့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ နောင်လာမယ့် လေးငါးနှစ်အတွင်းမှာ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေ ကိုင်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်း တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောတယ်လို့ သိရပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ဆင်းမ်ကတ်တွေကို အကန့်အသတ်နဲ့ ပေးနေတာမို့လို့ ဟန်းဆက်ဈေးကွက်ကလည်း သိပ်မဟော့ပါဘူး။ အခု CDMA 800MHzတွေက ဟန်းဆက် ရွေးတယ်လို့လည်း ပြောကြတယ်။
နောက်ပြီးတော့ အခု ၁၅၀၀တန် ဖုန်းလိုင်းတွေက တာဝါတိုင်နဲ့ လေးမိုင် ပတ်လည်အတွင်းမှာသာ ဆက်သွယ် ပြောဆိုနိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခု တန်ဖိုးနည်း ဖုန်းလိုင်းအတွက် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာမှာ တာဝါတိုင်ပေါင်း ၂၈၂ခု တည်ဆောက်ထားတယ်လို့ သိရပြီး ၎င်းတာဝါတိုင် ဧရိယာ အတွင်းမှာ ပြည်တွင်းပြည်ပ ခေါ်ဆိုမှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့ MPTကလည်း ပြောထားပါတယ်။ အရင် CDMA800တွေတုန်းက တည်ဆောက်ထားတဲ့ နည်းပညာအရ မိုင် ၂၀အတွင်း ဆက်သွယ် ပြောဆိုနိုင်တယ်လို့ သိရပြီး အခု MECTel အမှတ်တံဆိပ်ပါ ဖုန်းလိုင်းတွေဟာ တာဝါတိုင်နဲ့ လေးမိုင် အတွင်း၌သာ ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှု ပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုတာဟာလည်း ကွာဟချက်တစ်ခု ဖြစ်နေပါတယ်။
ကိုဘအေးကတော့ အဲဒီနည်းပညာတွေ နားမလည်ပါဘူး။ အခု ကိုဘအေးတို့ မြန်မာပြည်မှာ သုံးနေတဲ့ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အမျိုးအစားတွေက CDMA 450MHz, CDMA 800MHz, GSMနဲ့ WCDMA (ကမ်းရိုးတန်း)ဖုန်းတွေပဲလို့ သိထားပြီး GSM ဖုန်းလိုင်းတွေရဲ့ တာဝါတိုင်တွေက နည်းပညာအရ ၁၀မိုင်အတွင်း ဆက်သွယ် ပြောဆိုနိုင်ပြီး CDMA 450တွေအတွက် စိုက်ထူထားတဲ့ တာဝါတိုင်တွေဟာ အတားအဆီးမရှိတဲ့ လွင်ပြင်ဒေသများနဲ့ ပင်လယ် ကမ်းရိုးတန်း ဒေသများမှာ မိုင် ၂၀ နဲ့အထက် ကိုပင် ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဘာပဲပြောပြော ကိုဘအေးကတော့ C 800ဖုန်းလေး ကိုင်ရဦးတော့မယ်။ အခုလောလောဆယ် တစ်ယောက် တစ်လှည့် သုံးနေတဲ့ ကျောင်းက အရစ်ကျ ရောင်းခဲ့တဲ့ ၂သိန်းတန် Gကိုတော့ မဒမ်ဘအေးက သူပဲ ကိုင်မယ် ပြောတယ်။ ကိုဘအေးကိုတော့ ၁၅၀၀ပဲ ပေးမယ်တဲ့။ ကိုဘအေးက တွေးကြည့်တယ်။ ငါက ၁၅၀၀ပဲ တန်သလားလို့ပေါ့…..။
ko-ba-aye, price by 1500
Newer စေတနာဆိုသော စကားလုံးကို အလွဲသုံးစား မလုပ်တဲ့ စေတနာရှင် အမှန်
Older Telenor မှ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး ရည်မှန်းချက်များကို ထူးခြားသော အစီအစဉ်များဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဟုဆို
One thought on “၁၅၀၀တန် ကိုဘအေး”